ट्याग: एक स्मार्ट ग्रह | Martech Zone
ट्याग: एक स्मार्ट ग्रह
कुराको इन्टरनेट के हो? यो मार्केटिंगको अर्थ के हो?
मंगलवार, मार्च 3, 2015 शुक्रवार, नोभेम्बर ०,, २०२० Douglas Karr
कुनै पनि उपकरणको लागि इन्टरनेट जडान वास्तविकतामा परिणत भइरहेको छ। हाम्रो निकट भविष्यमा यसले ठूलो डाटा र बजारमा ठूलो भूमिका खेल्ने छ। गार्टनरले भविष्यवाणी गरेको छ कि २०२० सम्ममा इन्टरनेटमा जम्मा २ 2020 अरब उपकरणहरू जडान हुनेछन्। ] = [op26-0y9q6 चीजहरूको इन्टरनेट के हो चीजहरू बुझाउँछ जुन हामी सामान्य रूपमा जडान भएको जस्तो कल्पना गर्दैनौं। चीजहरू घरहरू, उपकरणहरू, उपकरणहरू, सवारी साधनहरू वा व्यक्ति हुन सक्छन्। मान्छे गर्दछ